Shiinaha oo si buuxda u daboolaya shidaalka dareeraha ah ee 6ml oo leh dhammaystir Matte ah oo bixiya Maalintii oo dhan Xirashada warshad qurxiyo oo waarta iyo soosaarayaasha | Jinfuya
Shayga MAYA J202A
Dhismo Creamy, siman, dhamaadka Satin, caymiska buuxa, Muddo dheer,Biyo-la’aan, fuuq-celin, Aan-lahayn
Ku habboon In ka badan 20 daah ayaa inta badan la jaan qaadi kara dhammaan maqaarka midabkiisa
Macluumaadka saafiga ah 0.203 fl oz. (6mL)
Shaqaynta Qari daloolada, wareegyada mugdiga ah ee indhaha hoostooda. Guduudasho iyo saxitaanka midabka maqaarka oo aan sinnayn
Qarixiyeyaasha Haydarooliga Hay'ada CaymiskaJ202A Waxay maqaarkaaga siinaysaa korriin fuuq-bax ah oo loogu talagalay dhammaystirka satin-ka ee aan dillaacin. Waana daboolid heer sare ah, muddo dheer xidhan oo ku habboon in la qariyo kuwa indhaha ka hooseeya guduudasho iyo dhibco jilicsan.
Qarinayahan ceymiska buuxawaa hubkaaga qarsoodiga ah inaad wajigaaga ugu fiican horay u mariso. Xusuusta muqaddaska ah ee qarinaya heer-ku-habboon ee heer-ku-xigga ah, qoyaankan qaniga ah, qaaciddada kareemku waxay isku dhex jirtaa sidii maqaar labaad oo dejinaya marxaladda wax kasta oo aad eegtid wadnahaagu doonayo. U diyaari codsi budo khafiif ah oo loogu talagalay qaab dabiici ah, habka ugu yar, ama si buuxda ugu tag maximalist leh bushimaha guduudan ee geesinimada leh iyo indhoolaha madow.
Jaangooyahaaga wejigaaga ka dhig mid ka kooban saddex-cabbir. Caanaha qaaciddada leh ee dhuumaha iyo dhididka ayaa saliida dhuuqaya si loo gaaro natiijo muddo-dheer socota. Quruxdu ha noqoto mid maalinle ah, oo baro dumarka sida loo noqdo gabdhaha quruxda badan ee kacsiga badan.
1.Arxan la’aan, vegan iyo 100% ka madax banaan Phthalates, Parabens, Nonylphenol, Ethoxylates, Triclosan, Triclocarban, iyo Hydroquinone.
2.Waxay maqaarkaaga siinaysaa korriin fuuq-bax ah oo loogu talagalay dhammaystirka satin-ka ee aan dillaacin.
3.U isticmaal usha inaad ku qariso waxyaabaha qariya meelaha la doonayo oo si tartiib ah ugu soo bax fartaada, buraashka ama isbuunyada.
4.Waxaa lagu heli karaa 23 midabo kala duwan.
Daboolid heer sare ah, xidho dheer oo kufiican in lagu qariyo meelaha dhibcaha leh iyo wareegyada indhaha hoostooda.
Hore: 18 Sano Warshad Qoyaan Lipstick - Clear Dibno dhalaalaya Qoyaanka Vegan Dibno Daryeel Qurxiyo Meel Dheeraad ah Dibno Dambe Leh Oo saliidaysan Dibno saliid ah bushimaha khafiifka ah - Jinfuya
Xiga: Caymiska buuxa ee dareeraha dareeraha ah ee 6ml dhammeystiraysa 16 saacadood oo qarsoodi ah oo qurxiyo leh oo tayo sare leh
Aasaaska Qurxinta Mudada Dheer
Aasaaska Liquid aan nadiifka lahayn ee matte Liquid Buuxda ...